TTR ဖဲကြိုးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ | China TTR ဖဲကြိုးစက်ရုံ
IML တံဆိပ် Flexo Printing Ma ...
Recycle ယက် Edge Satin
Flexo Pri အတွက်မှင်ပုံနှိပ်ခြင်း ...
Semi-Auto အပူလွှဲပြောင်းမှု ...
စောင့်ရှောက်မှုတံဆိပ် Resin ဖဲကြိုးကိုဆေးကြောပါ
1 Text အထည်အလိပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်အရည်အသွေး ၂ washing အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်သံသွားခြင်းများအတွက်ကောင်းမွန်သောခြစ်ရာနှင့် Smear ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၃ extreme အလွန်ပြင်းထန်သောအပူ၊ ခြောက်သွေ့သောသန့်ရှင်းရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရည်ခံများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်4Steam Resistant
Edin Resin ဖဲကြိုးအနီး
1、 Superior အပူ၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်အရည်ခံနိုင်စွမ်းအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ၂、 Wide Label Compatibility 3、 Static Ink Formulation နိမ့်ခြင်း4Near Near and Corner Edge ဘားကုဒ်တံဆိပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုရန်။
1. မြင့်မားသော opacity, vibrantcolours 2. မြင့်မားသော resolution, သေးငယ်တဲ့ဇာတ်ကောင်များ၏ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လိုင်းများကိုရှာပါ။ ၃။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ခြစ်ခြင်းများကိုကောင်းမွန်စွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ၄။ ပုံနှိပ်ခြင်း၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းအတွက်မြင့်မားသော sensitivity ၅။ စက္ကူ၊ ကတ်ထူပြားနှင့်ဒြပ်စင်အစုအဝေးအားလုံးအတွက်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောရလဒ်ကောင်း။
1， Superior အပူ, ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း 2， အထူသိပ်သည်းဆပုံနှိပ်ခြင်း3In အနိမ့်တည်ငြိမ်သောမှင်ဖော်မြူလာ ၄ the ဗဓေလသစ်အမျိုးအစားတွင်ထူးခြားသောတန်ဖိုး5UL အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
စူပါပရီမီယံဖယောင်း / ဗဓေလသစ်ဖဲကြိုး
1 in ဗဓေလက္ခံကဲ့သို့သော performanceat ဖယောင်း / ဗဓေလသစ်ပုံရိပ်ဂုဏ်သတ္တိများ 2、 သာလွန်ကောင်းမွန်သောအပူ၊ ပွန်းပဲ့ခြင်းနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ၃、 ပုံနှိပ်သောစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ ၄、 အလွန်ကောင်းသောပုံသေသိပ်သည်းမှုနှင့် Edge အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ပရီမီယံဖယောင်း / ဗဓေလသစ်ဖဲကြိုး
1、 Plug & Print Compatibility 2、 Superior အပူနှင့်ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း 3、 Wide Label Compatibility 4、 Printheadhead စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ 5、 Excelletnt Image Density & Edge Definition 6、 UL အသိအမှတ်ပြုထားသော
စံဖယောင်း / ဗဓေလသစ်ဖဲကြိုး
1、 Excellent ကပုံအမှောင် 2、 အဆင့်မြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိ333ကျယ်ပြန့်သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်း4Print ပုံနှိပ်တိုက်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များ
ပရီမီယံဗဓေလသစ်စေး Enhanced ဖယောင်းဖဲကြိုး
1、 ထူးကဲသောပုံရိပ် Density 2、 အဆင့်မြင့်ခံနိုင်ရည် ၃、 Wide Label Compatibility4rop Drop-In Replacement
1、 ထူးကဲသောပုံရိပ် Density 2、 Printhead စွမ်းအင်လိုအပ်ချက် ၃ L Wide LabelCompatibility 4、 အဆင့်မြင့်ခံနိုင်ရည် ၅ rop Drop-In Replacement
၁、 ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက် ၂ Low နိမ့်နိမ့်အလွှာများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခြင်း ၃、 ကောင်းမွန်သောခြစ်ရာနှင့်ခံနိုင်စွမ်းအားခုခံနိုင်မှု ၄、 ပုံနှိပ်ခြင်းနှုန်း ၈ ips